Myanmar, China Ink Deals to Accelerate Belt and Road | Myanmar Business Today
Home Business Regional Myanmar, China Ink Deals to Accelerate Belt and Road
Myanmar State Counselor Aung San Suu Kyi shakes hands with Chinese President Xi Jinping at the Presidential Palace in Naypyidaw, Myanmar, January 18, 2020.
China and Myanmar inked dozens of deals on January 18 to speed up infrastructure projects in the Southeast Asian nation, as Beijing seeks to cement its hold overaneighbor increasingly isolated by the West.
They agreed to hasten implementation of the China-Myanmar Economic Corridor,agiant infrastructure scheme worth billions of dollars, with agreements on railways linking southwestern China to the Indian Ocean,adeep sea-port in conflict-riven Rakhine state,aspecial economic zone on the border, andanew city project in the commercial capital of Yangon.
“The overall impression is that Myanmar is being cautious about Chinese investment, especially ahead of elections planned later in the year,” he said.
Atawelcoming ceremony January 17, Xi haileda“new era” of relations between the countries.
The two countries have historically hadafraught relationship, but have moved closer since 2017, when Myanmar was internationally condemned for its treatment ofaMuslim minority in Rakhine state.
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့သည် ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ စီမံကိန်းများ အရှိန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် စာချုပ် သုံးဆယ်ကျော်ကို ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
သို့သော် ၁၉ နှစ်တာကာလအတွင်းတွင် ပထမဆုံး မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့သည့် တရုတ်ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည့် တရုတ်သမ္မတ Xi Jinping ၏ နှစ်ရက်တာ ခရီးစဥ်အတွင်းတွင် စီမံကိန်းအသစ်များကို သဘောတူညီခဲ့ခြင်း မရှိပေ။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သတိထားဆောင်ရွက်နေသည့်အပြင် ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီတွင် သတိထားဆောင်ရွက်နေကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်သူများက ဆိုသည်။
တရုတ်သမ္မတ Xi နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့သည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလီယံချီတန်ကြေးရှိသော တရုတ်မြန်မာ စီးပွားရေးစင်္ကြံစီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
သို့သော် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကတည်းက ဆိုင်းငံ့ထားသည့် အငြင်းပွားမှုများရှိနေသော တရုတ်နိုင်ငံ၏ အမေရိကန်ဒေါ်‌လာ ၃ဒသမ၆ ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိသော မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ်ရာ ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့က ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနားတွင် တရုတ် သမ္မတ Xi က ၎င်း၏ ခရီးစ်မှာ နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေး၏ ခေတ်သစ်ဖြစ်ကြောင်း ချီးပပြောဆိုခဲ့သည်။
“အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားဖို့၊ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး အထောက်အပံ့ပေးဖို့အတွက် မောင်နှမရင်းချာ ရင်းနှီးမှုမျိုးအပေါ် အခြေခံတဲ့ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကို အသက်သွင်းမယ့် အနာဂတ် ‌လမ်းပြမြေပုံကို ရေးဆွဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ “နိုင်ငံတကာရေးရာများနှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍတွင်‌ရှိနေသည့် နိုင်ငံကြီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း” ပြောကြားခဲ့ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေမည့် စီမံကိန်းများ ရှောင်ရှားကာ ဒေသခံများ အကျိုးရှိသည့် စီမံကိန်းများကိုသာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
တရုတ်သမ္မတသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အခြေခံအဆောက်အအုံ စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်နေသော ‌တိုင်းရင်းသား‌ ဒေသများရှိ နိုင်ငံရေးပါတီများခေါင်းဆောင်များနှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
SOURCEBy Thu Thu Aung and Poppy McPherson(Reuters)
Previous articleWave Pay, 2C2P Partner to Offer Convenient Payments
Next articleDevelopments in Online-only Bank Licensing in Asia